Haddii uu RW Kheyre sameeyo sida sawirkaan ka muuqato hamiga shacabka wuu hirgalay | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » Haddii uu RW Kheyre sameeyo sida sawirkaan ka muuqato hamiga shacabka wuu hirgalay
Haddii uu RW Kheyre sameeyo sida sawirkaan ka muuqato hamiga shacabka wuu hirgalay
daajis.com:- Amiin Caamir oo ah Farshaxaniista weyn ayaa sawir gacmeed la yaableh wuxuu ka sameeyay Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah Shacabka Soomaaliyeed, kaasoo muujinayo iskaashi dhex marayo shacabka iyo dowladda.
Amin Arts ayaa sawirkaas ku muujiyey Geed uu ula jeedo Soomaaliya oo qeybta sare ee lamaha Geedkaas ka dhigay Masas uu u kala bixiyay magacyo dhawr ah oo kala ah Gaajo, Cudur , Qabyaalad, Nabad diid, Cadaalad darro iyo Musuq maasuq , waxaana faas la dhacay Ra’isulwasaaraha Soomaaliya iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo Farshaxan ahaan uga soo muuqday sawirkaan isagoo heysto Faas ama Misaar oo jiridka ka jaraya geedka si qeybta masaska ah ay meesha kaga baxaan isla markaana geedka laamo iyo caleemo hor leh uu u bixiyo taas oo uu ula jeedo in halkaas ay ku harayaan cadowga Soomaaliyeed.
Hadii ay dhacdo sida sawirkaan ka muuqato, waxay caddeyn u noqon doontaa in la gaaray hamiggii ay shacabka Soomaaliyeed ka lahaayeen Dowladda cusub oo uu hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Haddaba halkaan hoose ka daawo sawrika laga sameeyey arrintaa